Suuriya:Dagaal ka socda Palmyra - BBC Somali
Suuriya:Dagaal ka socda Palmyra
Image caption Ciidamada Suuriya
Xukuumadda Suuriya ayaa sheegtay in ciidammadooda ay dib uga caawiyeen maleeshiyada Daaciish, qaybta bari ee magaalada Palmyra, isla markaasna aysan dagaalyahanadaasi u suuragalin in ay gudaha u galaan magaaladaasi qadiimiga ah.
Warbaahinta dawladda ayaa soo xigatay gudoomiyaha magaalada Xims oo sheegaya in goobtaasi ay ammaan tahay ayna difaaceen ciidammada Suuriya.
Dagaalka hadda socda waxa uu ku tilmaamay mid u dhaxeeya ilbixnimada iyo xumaanta, waxa uuna ku baaqay faragalin caalami ah si looga baaqsado masiibo ku timaada dhaqanka.
Faragalin dibadda ah waa mid aan aad macquul u ahayn inkasta oo ay jirto walaac wayn oo caalami ah.
Image caption Magaalada Palmyra
Palmyra, oo Suuriya looga yaqaano Tadmor waxa ku yaala saldhigyo waawayn, garoomo diyaaradeed, waxaana sidoo kale yaala rasaas badan iyo gantaalo, Daacishna waxa ay jeclaan lahaayeen in ay gacanta ku dhigaan.
Sidoo kale waxaa laga maamulaa wadada halbawlaha ah ee isku xirta bartamaha iyo bariga Suuriya, taas oo qiimo wayn uyeelayaysa istaraatiijiyadda.
Taasi waa sababta ay ugu muuqato in ciidammada dawladda Suuriya ay aadka ugu difaacayaan magaaladaasi, Ciidammada cirka ayaa sidoo kale qaaday weeraro xagga cirka ah saraakiishuna waxa ay sheegeen in ay ku dileen weeraradaasi tiro malayshiyaad ah ayna ku gubeen gawaari halkaas iyo saxaraha bariga